I-Cottage yoLwandle lwaseLwandle kwiNqaku
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguGladys
Wamkelekile kwi-A.G. Groff House (ikhaya likatatomkhulu wam omkhulu, omkhulu!!). Mamela iimpondo zenkungu, unukise umoya wetyuwa, kwaye uhambe uye kwi-YONKE INTO ukusuka kule ndlu yakudala ye-1840s kwiNdawo yembali yecandelo laseNewport, iibhloko ezi-2 nje ukuya eBay. Buyela umva ngexesha njengoko ugqitha kucingo lwepikethi emhlophe udlula intshinga yeerozi kwiveranda yangaphambili egqunyiweyo. LE yeyona nto iphambili yaseNewport-indlwana encinci ngaselwandle enekhitshi elinelanga, iibhedi ezinkulu ezi-2, kunye neebhafu ezi-2 ezigcweleyo.
Ukupaka iimoto ezi-2!
Yintoni eyenza icandelo leNdawo yembali yeNewport inqweneleke kakhulu kukukufutshane kwayo emanzini kunye nedolophu yaseNewport, kodwa ihleli iyindawo yokuzola, indawo eyimfihlo engaphaya kwesiphithiphithi sokuhamba kwedolophu yasehlotyeni kunye nabakhenkethi. Izitrato ezimxinwa, iindlela zokuhamba ngezitena, izibane zegesi, iigadi ezifihlakeleyo, kunye noyilo olumangalisayo oluthatha iminyaka engama-350 lukwenza uzive ngathi ubuyile umva ngexesha! Thatha ipali yokuloba kwaye uye eVan Zandt Pier ukuze ubone ukuba iistririers ziyabaleka na, khwela iBlue Rocks, uzingele iglasi yolwandle kwindawo ephantsi, upakishe into yokuthintela ipikniki kwaye utye phantsi komthi womthunzi wakudala eBattery Park, uye eBelle's. kwindawo yeenqanawa kwisidlo sakusasa kunye noomatiloshe, okanye uhambe ngeseyile ngokwakho ukusuka kwi-marina kwiSiqithi seBhokwe.